Ibhotile yodonga engenomoya engenye
Iibhotile ezimbini ezingena moya
Ibhotile kabini engenomoya
Ibhotile enye yodonga olulodwa
Ibhotile yelaphu enamacala amabini
Ibhotile enezinto ezimbini
Imbiza yodonga ephindwe kabini
Imbiza enye yekrimu yodonga
Ibhotile esetyenziswa kwakhona
I-Lipgloss / ityhubhu yediphu
Isilivere yokuGqibela iFlower ngokucacileyo ngo-15ml 30ml 50ml ...
Isikweri esisezantsi se-PET Screw cap Plast Fist Mist ...
Iipesenti ezingama-25 zePakethi yePacific Eco-PCR yephepha ...
I-Amber PET I-Bottery yeBhotile yePlasitiki yeBhotile ...
Ulondolozo lolusu Sebenzisa Ibhotile enomoya omnyama engenamntu kulusu lwesikhumba ...
2 kwi-1 Tubes Dual Chamber Tubes
ngu admin nge-20-07-16
1. Umthamo: 25ml dibanisa 25ml, 30ml dibanisa 30ml, 50ml dibanisa 50ml, 100ml dibanisa 100ml njalo njalo. 2. Ntsha: Iifomula ezimbini zigcwalisa iityhubhu ezimbini zegumbi kwaye ziphume ngokwahlukeneyo, kwaye emva koko zidibanise.
Uluhlu lwePET yeMpahla yokuPakisha iLotion yeToner yeToter
ngu admin nge-20-07-10
1. I-TE04 ibhombu yentsimbi yomoya engenamoya kunye nomfaki sicelo, inketho yokwenza isicelo se-zinc alloy. 2. I-PET yothotho lwezinto ezipakishwa ngebhotile ye-lotion eyi-120ml, ibhotile yeetoni ezingama-200ml kunye ne-50ml jar jar. 3. Ibhotile088 ye-100ml ibhotile yokutshiza inkungu
Ibhotile ye-Serum yamehlo engenamoya kunye noMfaki-sicelo ohlukileyo
1. Ibhotile ye-Serum yamehlo engenamoya kunye noMfaki-sicelo owahlukileyo. 2. Iibhotile zeSanitizer ezingama-30ml eziphathwayo zezabafundi. 3. Ibhotile ye-PET esitokhwe kunye neFlip ephezulu kunye nesitshizi.
Concise Shape Uyilo lweMpompo yeBhotile
I-TB01 Foam Pump Bottle Concise uyilo lobume, i-silky foam cosmetics. PA12 Izinto ezingena moya zebhotile yokutya yePP, zinokuba sisiphumo se-matte ngaphandle kokupeyinta ipeyinti yokuqhola. I-PJ42 PCR Jar 100% Iplastiki ehlaziyiweyo, I-PP-PCR ye-cream jar yangaphantsi yoyilo ngakumbi.
Ibhotile enomdaka kunye neDropper yeBhotile yeCarry
ngu admin kwi-20-07-09
I-PDD01 Ibhotile yeDodot Concise kuyilo lobume, 10ml deodorant enezinto zeglasi kunye nebhola erhangqayo enezinto zentsimbi. I-PA16 yePP yeBhotile engenamoya, imibala ehleliweyo kunye nokuprinta kwamkelwe. I-PDW01 Ibhotile ye-Dropper kunye ne-PJW01 Cream Jar Glass ezibonakalayo, fafaza ipinkon umbala webhotile kunye neebhotile zewashi, isilika ...
I-Dual Chamber Bottle kunye ne-Eco-friendly PCR yeBhotile engenamoya
I-PL19 100ml I-Dual Chamber Bottle yegumbi ezimbini zebhotile yangaphakathi, ukuzalisa iintlobo ezimbini zeemveliso, kuphuma iintlobo ezimbini zefomula ngaxeshanye. I-TA04 AS Ibhotile engenamphefumlo yohlobo elula yokuyila, umbala wentando yabucala kunye nokuprintwa kwamkelwe. I-PA66 E--friendly-PCR yeBhotile engenamveliso yeBhotile ..
Iibhotile zeDibano zeMbali ezimbini ezidumileyo zoKhathalelo lweSikhumba kunye noKhathalelo lwamehlo
ngu admin nge-20-07-07
Isindululo sokuPakisha izithambiso ngoJulayi sisuka eTopfeelPack, iiBhotile zeDult Chamber ezaziwayo zoKhathalelo loLusu kunye noKhathalelo lwamehlo.
Ukusetyenziswa kweebhotile ze-PET kuyenyuka
ngu admin nge-20-05-09
Ngokwengxelo yomhlalutyi uMac Mackenzie, imfuno yehlabathi yeBhotile ye-PET iyenyuka. Isiteyitimenti siqikelela ukuba nge-2030, imfuno ye-rPET eYurophu iya kwanda amaxesha ama-6. UPieterjan Van Uytvanck, umhlalutyi oyintloko eWood Mackenzie, uthe: "Ukusetyenziswa ...
Ulwazi olusisiseko lwebhotile engenomoya
1. Malunga nebhotile engenamoya Iziqulatho zebhotile engenamoya zinokuvalwa ngokupheleleyo emoyeni ukuthintela imveliso ukuba ingasebenzi i-oxidizing kunye nokuguquka ngenxa yokuchukumisa umoya, kunye nokuzala iintsholongwane. Umqondo wobugcisa obuphakamileyo uphakamisa umgangatho wemveliso. Iibhotile zokucoca ezidlulayo ...
Inombolo yomnxeba: + 86-755-25686685